“Raha tsy i Jehovah no manao ny trano, dia very maina ny asa mafy ataon’ny mpanorina azy.”—SAL. 127:1a.
Inona no olana atrehin’ny mpivady?
Inona no hanampy ny mpivady tsy hanadino an’i Jehovah mihitsy?
Inona no azon’ny mpivady atao mba hampiharana ny Lioka 6:31?
1-3. Inona avy ny olana atrehin’ny mpivady? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
HOY ny lehilahy iray sambatra am-panambadiana nandritra ny 38 taona: “Raha samy tena miezaka ianareo, ka asehonareo fa tianareo ho sambatra ny tokantranonareo, dia hitahy anareo i Jehovah.” Afaka miara-mankafy fiainana sy mifanampy ao anatin’ny sarotra tokoa ny mpivady.—Ohab. 18:22.
2 Matetika anefa ny mpivady no ‘manam-pahoriana amin’ny nofony.’ (1 Kor. 7:28) Nahoana? Mety hampisy disadisa ny olana isan’andro. Samy tsy lavorary ny mpivady na dia tena mifandray tsara aza. Mety hilaza zavatra mampalahelo ny andaniny àry ny ankilany, na tsy hifankahazo hevitra izy ireo, na tsy hifampiresaka tsara. (Jak. 3:2, 5, 8) Maro koa ny mpivady miasa mafy sady mikarakara ny zanany. Misy indray miady saina sy vizana be ka sahirana vao mahita fotoana hanamafisana ny fifankatiavany. Mety hampihena ny fifankatiavana sy ny fifanajana ny olana ara-bola, na aretina, na olana hafa. Ary na ny tokantrano heverina ho mafy orina aza mety ho rava tsikelikely noho ny “asan’ny nofo”, toy ny fijangajangana, fitondran-tena baranahiny, fifandrafiana, fifamaliana, fialonana, fipoahan’ny fahatezerana, ary fifandirana.—Gal. 5:19-21.
3 Poizina manimba tokantrano koa ny fitiavan-tena sy ny tsy fanajana an’Andriamanitra, izay mampiavaka ny “andro farany.” (2 Tim. 3:1-4) Manampy trotraka an’izany ilay fahavalo ratsy fanahy, izay tapa-kevitra handrava ny tokantrano. Hoy ny apostoly Petera: “Ny Devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona, mitady olona harapaka.”—1 Pet. 5:8; Apok. 12:12.
4. Nahoana no azo atao ny manana tokantrano mafy orina sy sambatra?
4 Hoy ny lehilahy iray any Japon: “Nampiady saina be ahy ny resaka vola. Tsy niresaka tsara tamin’ny vadiko anefa aho ka niady saina koa izy. Vao haingana koa izy no narary be. Nampiady anay izany rehetra izany indraindray.” Tsy azo ialana ny olana sasany ao an-tokantrano nefa azo alamina. Manampy anefa i Jehovah ka azo atao ny manana tokantrano mafy orina sy sambatra. (Vakio ny Salamo 127:1.) Handinika zavatra dimy afaka manamafy orina ny tokantrano sy mampaharitra azy io isika. Ho hitantsika koa fa tena ilaina ny fitiavana.
AZA HADINOINA MIHITSY I JEHOVAH
5, 6. Inona no ataon’ny mpivady tsy manadino an’i Jehovah?
5 Tsara fototra ny fanambadiana rehefa tsy mivadika amin’ilay Mpamorona azy io ny mpivady sady manaiky ny fahefany. (Vakio ny Mpitoriteny 4:12.) Tsy manadino an’i Jehovah ny mpivady rehefa manaraka ny tari-dalany feno fitiavana. Hoy ny Baiboly: “Raha mivily miankavanana ianao na mivily miankavia, dia ho ren’ny sofinao ny teny avy ao aorianao hoe: ‘Ity no lalana ka andehano.’ ” (Isaia 30:20, 21) Toy ny mandre ny tenin’i Jehovah ny mpivady, rehefa miara-mamaky ny Teniny. (Sal. 1:1-3) Vao mainka mafy orina ny tokantranony rehefa manao Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana izy ireo, ary manao izay hahatonga azy io hahafinaritra sy hampahery. Tena ilaina koa ny miara-mivavaka isan’andro raha tiana hahatohitra ny fanafihan’ny tontolon’i Satana ny tokantrano.
Hifandray tsara amin’Andriamanitra sy hifandray am-po ny mpivady raha miara-manao zavatra mifandray amin’ny fanompoana an’i Jehovah (Fehintsoratra 5, 6)
6 Hoy i Gerhard any Alemaina: “Mihena ny fifalianay mivady rehefa misy olana eo aminay na tsy mifankahazo ny hevitray. Manampy anay hanana faharetana sy ho zatra mifamela anefa ny torohevitry ny Tenin’Andriamanitra. Tena ilaina ireo toetra ireo mba hananana tokantrano sambatra.” Miezaka mafy tsy hanadino an’i Jehovah ny mpivady rehefa miara-manao zavatra mifandray amin’ny fanompoana azy. Hifandray tsara aminy izy ireo amin’izay ary hifandray am-po sy ho sambatra.
LOHAM-PIANAKAVIANA BE FITIAVANA
7. Ahoana no tokony hampiharan’ny lehilahy ny fahefany?
7 Miankina betsaka amin’ny fomba ampiharan’ny lehilahy ny fahefany no hahamafy orina sy hahasambatra ny tokantranony. Hoy ny Baiboly: “I Kristy no lohan’ny lehilahy rehetra, ny lehilahy no lohan’ny vehivavy.” (1 Kor. 11:3) Hita amin’ny teny manodidina an’io andininy io fa mila manahaka ny fomba ampiharan’i Kristy ny fahefany ny lehilahy. Tsy nanjakazaka na nasiaka i Jesosy fa be fitiavana foana, tsara fanahy, nahay nandanjalanja, nalemy fanahy, ary nanetry tena.—Mat. 11:28-30.
8. Inona no azon’ny lehilahy atao mba ho tia azy sy hanaja azy ny vadiny?
8 Tsy tokony hamerimberina amin’ny vadiny ny lehilahy kristianina hoe tsy maintsy manaja azy izy. ‘Miara-mitoetra foana amin’ny vadiny araka ny fahalalana’ kosa izy, ka miezaka mahafantatra izay ilainy sy ny fihetseham-pony. ‘Manome voninahitra azy izy, toy ny atao amin’ny fanaka malemy kokoa.’ (1 Pet. 3:7) Asehon’ny lehilahy koa fa sarobidy aminy ny vadiny, ka manaja sy mangoraka azy amin’ny teniny sy ny ataony izy, na eny imason’olona na tsia. (Ohab. 31:28) Lasa tian’ny vadiny sy hajainy izy rehefa mampihatra ny fahefany amim-pitiavana toy izany, ary hotahin’i Jehovah ny tokantranony.
VEHIVAVY MANETRY TENA SY MANAIKY NY VADINY
9. Inona no hataon’ny vehivavy manetry tena sy manaiky ny vadiny?
9 Hanampy antsika rehetra hanetry tena eo ambanin’ny tana-maherin’i Jehovah ny fitiavana azy. (1 Pet. 5:6) Fitiavana tsy mitady valiny izy io sady mifanaraka amin’ny toro lalany. Asehon’ny vehivavy fa manaiky ny fahefan’i Jehovah izy, rehefa miara-miasa amin’ny vadiny sy manohana azy. Hoy ny Baiboly: “Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo fa zavatra mety izany eo imason’ny Tompo.” (Kol. 3:18) Marina fa tsy voatery ho tian’ny vehivavy foana ny fanapahan-kevitry ny vadiny. Vonona hilefitra anefa ny vehivavy manaiky ny vadiny, rehefa tsy mifanipaka amin’ny lalàn’i Jehovah ilay fanapahan-kevitra.—1 Pet. 3:1.
10. Nahoana ny vehivavy no mila manaiky amim-pitiavana ny vadiny?
10 Manana toerana mendri-kaja ny vehivavy satria naman’ny vadiny. (Mal. 2:14) Tena ilaina izy rehefa misy fanapahan-kevitra raisina. Afaka milaza ny heviny sy ny fihetseham-pony amim-panajana izy, nefa manaiky ny vadiny foana. Mihaino tsara izay lazain’ny vadiny ny lehilahy hendry. (Ohab. 31:10-31) Lasa faly sy mifandray tsara ary miray saina ny fianakaviana, rehefa manaiky amim-pitiavana ny vadiny ny vehivavy. Afa-po koa izy mivady satria mampifaly an’Andriamanitra.—Efes. 5:22.
MIEZAHA FOANA HIFAMELA HELOKA TANTERAKA
11. Nahoana no tena ilaina ny mifamela heloka?
11 Tena ilaina mba hampaharitra ny fanambadiana ny famelan-keloka. Mihamafy ny fatoram-panambadiana rehefa miezaka foana ny mpivady mba ‘hifampizaka sy hifamela heloka tanteraka.’ (Kol. 3:13) Hihena kosa ny fifankatiavana raha mitana lolompo ny mpivady, ary mampahatsiahy matetika ny fahadisoan’ny iray ka mampiasa izany mba hamelezana azy. Mihasimba, ohatra, ny trano rehefa misy triatra. Toy izany koa ny tokantrano rehefa misy lonilony sy fahatezerana. Raha avela hibahana ao am-po izany, dia ho sarotra kokoa ny hifamela. Mihatsara kosa ny fifandraisana rehefa samy mamela heloka ny mpivady, toy ny ataon’i Jehovah aminy.—Mika 7:18, 19.
12. Nahoana no lazaina fa manarona “fahotana maro be” ny fitiavana?
12 “Tsy mitana lolompo” ny fitiavana fa “manarona fahotana maro be.” (1 Kor. 13:4, 5; vakio ny 1 Petera 4:8.) Tsy hasiantsika fetra àry ny famelana ny heloky ny hafa raha be fitiavana isika. Rehefa nanontany an’i Jesosy ny apostoly Petera hoe impiry izy no tokony hamela heloka, dia hoy i Jesosy: “Hatramin’ny impito amby fitopolo.” (Mat. 18:21, 22) Te hilaza izy fa tsy tokony hasian’ny Kristianina fetra ny famelany ny heloky ny hafa.—Ohab. 10:12. *
13. Inona no hanampy antsika raha mitady tsy ho tia mamela heloka isika?
13 Hoy i Annette: “Hitombo ny lonilony ary tsy hifampatoky ny mpivady raha tsy mety mifamela heloka. Poizina manimba ny fanambadiana anefa izany. Rehefa mifamela kosa izy ireo, dia lasa mifandray kokoa ary mihamafy ny fatoram-panambadiany.” Miezaha hankasitraka ny vadinao sy hisaotra azy raha mitady tsy ho tia mamela heloka ianao. Ataovy fahazarana ny milaza teny fiderana vokatry ny fo. (Kol. 3:15) Hilamin-tsaina sy hiray saina ary hotahin’i Jehovah ianareo mivady raha samy tia mamela heloka.—Rom. 14:19.
IZAY TIANAO HATAO AMINAO NO ATAOVY AMINY
14, 15. Inona no lazain’ny Lioka 6:31, ary nahoana izy io no tena mahasoa ny mpivady?
14 Azo inoana fa tianao raha manaja anao ny olona. Faly ianao rehefa misy mihaino ny hevitrao sy mihevitra ny fihetseham-ponao. Efa henonao ve anefa ilay hoe: “Ataoko hitany kely ny nanaovany ahy”? Mety ho rariny raha miteny izany ny olona indraindray, nefa hoy ny Baiboly: “Aza manao hoe: ‘Izay nataony tamiko no hataoko aminy.’ ” (Ohab. 24:29) Nanoro fomba tsara kokoa hiatrehana olana i Jesosy. Nilaza an’ity fitsipika malaza ity izy: “Izay tianareo hataon’ny olona aminareo no ataovy aminy koa.” (Lioka 6:31) Te hilaza izy fa izay tiantsika hataon’ny olona amintsika no tokony hataontsika aminy, ary tsy mety ny mamaly ratsy ny ratsy. Midika izany fa izay tianao hitondran’ny vadinao anao no tokony hitondranao azy.
15 Manamafy ny fifankatiavany ny mpivady, rehefa mihevitra ny fihetseham-pon’izy samy izy. Nilaza ny lehilahy iray atsy Afrika Atsimo fa niezaka nampihatra ny Lioka 6:31 izy mivady. Hoy izy: “Sorena izahay indraindray nefa miezaka mafy mba hifanaja, ka mampihatra an’ilay hoe izay tianao hatao aminao no ataovy amin’ny hafa.”
16. Inona no tsy tokony hataon’ny mpivady?
16 Aza aharihary ny fahalemen’ny vadinao na ny fahazarany hafahafa, na dia amin’ny vazivazy aza. Tadidio fa ny fanambadiana akory tsy fifaninanana hijerena hoe iza no matanjaka kokoa, na mahavazavaza mafy kokoa, na mahita teny tena mandratra. Samy manana kileman-toetra isika ary mampahatezitra ny hafa indraindray. Tsy mety mihitsy anefa ny maneso na manambany vady, na manosika sy mamely azy.—Vakio ny Ohabolana 17:27; 31:26.
17. Inona no hataon’ny lehilahy manambady raha mampihatra ny Lioka 6:31 izy?
17 Izay mampijaly na mikasi-tanana ny vadiny no heverina ho tena lehilahy, amin’ny kolontsaina sasany. Hoy anefa ny Baiboly: “Aleo olona tsy mora tezitra toy izay lehilahy matanjaka, ary aleo olona mahafehy tena toy izay olona mahazo tanàna ho babo.” (Ohab. 16:32) Tena mila herim-po ny lehilahy raha te hifehy tena hoatran’i Jesosy Kristy, ilay lehilahy niavaka indrindra. Tsy tena lehilahy izay manao teny maharary na mamono ny vadiny, sady hanimba ny fifandraisany amin’i Jehovah. Lehilahy natanjaka sy be herim-po i Davida mpanao salamo, nefa hoy izy: “Tezera fa aza manota. Tazòny ao am-ponareo ihany ny teninareo, eo am-pandriana. Ary aoka hangina ianareo.”—Sal. 4:4.
18. Nahoana no tena ilaina foana ny manana fitiavana?
18 Vakio ny 1 Korintianina 13:4-7. Ny fitiavana no toetra tena ilain’ny mpivady. “Mitafia fitiavana lalina sy fangoraham-po, hatsaram-panahy, fanetren-tena, fahalemem-panahy, ary fahari-po. ... Fa ambonin’izany rehetra izany, dia mitafia fitiavana fa fatorana mampiray tonga lafatra izy io.” (Kol. 3:12, 14) Toy ny rihitra simenitra mampikambana ny biriky mba hahamafy tsara ny trano ny fitiavana feno fahafoizan-tena toy ny an’i Kristy. Manamafy orina ny fanambadiana izany, ka tsy ho rava mihitsy izy io, na eo aza ny toetra mahasosotra, ny aretina mampitebiteby, ny olana ara-bola mampiady saina, ary ny disadisa vokatry ny fifandraisana amin’ny havam-bady.
19, 20. a) Inona no azon’ny mpivady atao mba ho mafy orina sy ho sambatra ny tokantranony? b) Inona no hodinihina ao amin’ny lahatsoratra manaraka?
19 Tena ilaina mba hahasambatra ny tokantrano ny fitiavana sy ny tsy fivadihana ary ny ezaka mafy. Tsy tokony hieritreritra ny hisaraka ny mpivady rehefa misy olana. Mila miezaka foana izy ireo mba hanao izay hahasambatra ny tokantranony, fa tsy hoe hampaharitra azy io fotsiny. Tokony ho tapa-kevitra handamina an’izay olana mitranga ny mpivady tia an’i Jehovah sy mifankatia. “Tsy ho levona mandrakizay” mantsy ny “fitiavana.”—1 Kor. 13:8; Mat. 19:5, 6; Heb. 13:4.
20 Tena tsy mora ny manana tokantrano sambatra sy mafy orina amin’izao “fotoan-tsarotra” izao. (2 Tim. 3:1) Azo atao anefa izany noho ny fanampian’i Jehovah. Hodinihina ao amin’ny lahatsoratra manaraka izay azon’ny mpivady atao mba hiarovana ny tokantranony. Ratsy fitondran-tena mantsy ny olona maro eto amin’ity tontolo ity, ka tsy maintsy miady mafy ny mpivady mba tsy hanahaka azy ireo.
^ feh. 12 Marina fa miezaka hifamela sy handamina olana ny mpivady. Raha manitsakitsaka anefa ny iray, dia milaza ny Baiboly fa afaka misafidy ilay vady tsy diso hoe hamela heloka sa hisara-panambadiana. (Mat. 19:9) Jereo ireto: “Fisaraham-panambadiana sy Fisarahan-toerana”, boky “Fitiavan’Andriamanitra”, pejy 219-221 sy “Ny Fiheveran’ny Baiboly—Fanitsakitsaham-bady: Hamela Heloka sa Tsy Hamela?”, Mifohaza! 8 Oktobra 1995.
Hizara Hizara Ahoana no Ananana Tokantrano Mafy Orina sy Sambatra?